Sexy V vozony eo an-tampon-tsoroka mamatotra sombin-doko Bikini Set |
Famolavolana lozisialy v vozon'ny tendrony sy fehin-soroka miaraka amina tsipitsipika miampita miambavy, ataovy mahafinaritra kokoa ny akanjo ambony tankini.
Ny ambany bikini dia misy tadiny roa amin'ny lafiny mampifandray aloha sy aoriana,mameno ny fehezan-teny roa amin'ny soroka. Hahatonga anao hahatsapa ho tsara sy manintona ho lasa fahitana mahafinaritra.
Io fehin-kibo mifehy ny akanjo milomano ho an'ny vehivavy mety amin'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina, pisinina, fety rano ary fialan-tsasatra tropikaly. Andao ekena ny vanim-potoanan'ny fanaovana tanna!
Manana habe amerikana isan-karazany izahay, S (US 0-2), M (US 4-6), L (US 8-10), XL (US 12-14), 2XL (US 16-18). Safidio azafady ho anao ny habeny. Mirary tontolo andro mahafinaritra!
❀Model manao akanjo madinidinika. Mihazakazaka tena mety! Raha tianao ny fomba tsy milamina, afaka misafidy habe lehibe kokoa ianao.
❀Ny akanjo milomano iray tsy misy lamosina dia misy v-neckline lalindalina miaraka amina fehikibo spaghetti azo amboarina, kaopy azo esorina ary vohana misokatra. Ity akanjo fandroana iray ity ho an'ny vehivavy dia misy fatra ao anaty fitaovana ho an'ny tena mety sy mahatsapa!
❀Fanehoana endrika pirinty momba ny biby sy loko miloko, fomba fanao tsy maintsy ananana io! Ary tsy mety diso ianao amin'ny aloky ny v-vozon'ny volo sy ny endrika iray!
❀Anampy fotsiny ireo sunnies tianao sy satroka iray! Na azonao atao ny manaingo amin'ny sarony, cardigan, kimono ary solomaso ho an'ny fijery tsara ny andro amoron-dranomasina! Ity endrika tsara tarehy ity dia mora be amin'ny fitiavana mandritra ny fahavaratra!
❀Ny vehivavy akanjo lava dia mety amin'ny lafiny amoron-dranomasina, sisin'ny pisinina, fialan-tsasatra, fialantsasatra, fitsangantsanganana ary fitsangatsanganana matetika.
Previous: Milahatra feno vehivavy milomano haingon-damba roa voafantina Tummy Control Monokini
Manaraka: Malalaka avo voapaika tongotra Cheeky seza fandrakofana akanjo iray fandroana akanjo ho an'ny vehivavy
Akanjo baoty vehivavy
Landihazo malefaka tsy mitaingina tongotra lava mangidihidy ...
Fanaparitahana lamba feno tsy hita-throu ...
Mora miaina ny mitafy gym gym yoga ...